Izithintelo zeSpotify ziyahluka ngeLizwe
ipilisi etyheli ukulahleka kobunzima
Ezinye ii-albhamu zebhendi ziyafumaneka kumazwe athile e-Spotify hayi kwamanye. Izivumelwano ezintsonkothileyo zeSpotify ezinelebheli zokurekhoda zithintela ukudlala kwezinye iingoma kumazwe akhethiweyo. U-Spotify uthi izithintelo zibuya kwiintsuku zekhasethi kunye neeCD (zithini kwakhona?).
I-albhamu yokuqala ye-electropop band yeLa Roux ayifumaneki ukuba idlalwe ngokupheleleyo ukuba iakhawunti yakho ibhaliswe e-UK (ngokungathandekiyo, ibhendi yiBritane), kodwa ialbham engaziwayo iyafikeleleka kubabhalisi kwamanye amazwe eSpotify, anjengeFrance.
Nanku umyalezo wesilumkiso ovelayo xa uzama ukuyidlala kwiakhawunti yase-UK: Le albhamu ayifumaneki e-United Kingdom. Zintathu kuphela iingoma ezifumanekayo ukuba umamele (ezinye iingoma ezifakwa ezingwevu zingwevu), kwaye ezi ngoma azikho ngokusemthethweni kwi-albhamu - zinxulunyaniswe nokukhutshwa okukodwa (oko are iyafumaneka e-UK, njengoko kubonisiwe yi icon ye-link-link).
Esi sithintelo silihlazo kuba, ngaphambi kwemithetho ebekiweyo, ialbham yayifumaneka ngokupheleleyo kwiSpotify UK. I-La Roux ibonakalisiwe nakwirekhodi ekhethekileyo yokurekhoda (isafikeleleka kwindawo).
Kukwanjalo nangemvumi yase-Iceland uBjörk. Unokufumana uninzi lwezinto zakhe kwiSpotify, kodwa kwi-albhamu yakhe ka-2004 IMedulla ayifumaneki kwiSpotify UK. Pha are iingoma ezimbini ezikhoyo, kodwa ezi ngoma zine-icon ye-chain-link ecaleni kwazo, ebonisa ukuba ayizizo iinguqulelo zoqobo ezivela kwi-albhamu (ungafumana umthombo wengoma efakwe endaweni ngokunqakraza kwi-link-link icon).
Zombini ii-albhamu zikaLa Roux kunye neBjörk azibonisi kukhangelo ukuba ungene kwiakhawunti ebhalisiweyo yase-UK.
Ngombulelo, iingxelo malunga nomculo otsalwa ziilebhile zokurekhoda emva ukuba umculo ubuxhonyiwe kwiSpotify okwethutyana bambalwa kwaye ukude phakathi kwezi ntsuku.
Ngelixa ulinde amagcisa ukuba afike ngenkulungwane yama-21 kwaye enze indlela eya eSpotify, unokufumana uninzi lweebhanti ezikhuselayo ezikhuthaza iinguqulelo zazo kwisiza, ekunokwenzeka ukuba siseshishini elincinci elinenzuzo. Bazibhala ngeengcingo iithrekhi zabo kwiNdlela okanye kwiRhafu.
Ukufumana ezi zenzo, nokuba ujonga igama lebhendi okanye igama lomkhondo ofuna ukuliva, uze umangaliswe ziziphumo zokukhangela ezinomdla.
inye ngosuku ngemiphumela yokukhulelwa
isebenza njani intengiso yokuhambelana
ipilisi emhlophe embhoxo ine-4h2
Iziphumo ze-valproic acid zokonga